Mas'uuliyiin iyo Saraakiil Itoobiyaan Ah Oo Amar Diiddo Sameeyay iyo Warqado Digniin Ah Oo Lagu Daadiyay Addis Ababa.
Thursday January 11, 2018 - 12:24:45 in Wararka by Super Admin
Jiha wareer dhanka amniga iyo siyaasadda ah ayaa ka taagan wadanka Itoobiya kadib markii ay sii xoogeysteen kacdoonadii shacbiga ee lagu diidanaa Taliska Xabashida ee fadhigiisu yahay magaalada Addis Ababa.
Warqado digniin ah ayaa lagu daadiyay Addis
Wararka ka imaanaya Itoobiya ayaa sheegaya in rabashadaha dhiigga badan ku daadanayo ay wali kasii socdaan gobollada Oromia iyo Amhara oo sanaddii 2016 ku kacdoomay Nidaamka talada haya.
Boqolaal qof ayaa bilihii lasoo dhaafay ku dhintay weeraro ka dhacay deegaanno katirsan gobollada Somaligalbeed iyo Oromia arrinkaas oo ay ku lug lahaadeen saraakiil katirsan wasaaradda difaaca Itoobiya.
Colaaddan oo ay huriyeen maleeshiyaadka Liyuu Booliska dowladda Itoobiya ayaa saameyn ku yeeshay dowladda xabashida taasi oo keentay in kala shaki ballaaran uu soo kala dhax galo mas’uuliyiinta dowladda.
Wasiirka difaaca Itoobiya Siraaj Fajiisa ayaa markii ugu horraysay u goodiyay qaar kamid ah saraakiisha ciidanka oo uu ku eedeeyay amar diido iyo ku lug lahaashiyaha kacdoonka wadanka ka socda.
Siraaj Fajiisa oo warbaahinta kula hadlayay magaalada Addis Ababa ayaa sheegay in ay jiraan saraakiil ciidan iyo mas’uuliyiin si toos ah ugu lug yeeshay kacdoonnada iyo rabshadaha wali kasii socda wadanka.
Wuxuu si gaar ah u sheegay in saraakiil katirsan maleeshiyaadka Soomalida Liyuu Booliska iyo kuwa Oromada ay diideen in ay u hoggaansamaan awaamirta dowladda wuxuuna ugu hanjabay in tallaab laga qaadi doono.
Dhinaca kale Dadka kunool magaalada Addis Ababa ayaa saaka ku waa bariistay warqado digniino ah oo daadsan waddooyinka magaalooyinka waaweyn.
Goob joogayaal ayaa sheegay in warqadaha ay ku qornaayeen Erayo ka dhan ah Nidaamka Itoobiya, warqadaha ladaadiyay ayaa looga digayay madaxda dowladda Itoobiya sii wadidda tallaabooyinka ay ku daminayaan kacdoonka isbedel doonka ah ee wali wadanka ka socda.
Dhaq dhaqaaqyada mucaaradka Itoobiya ayaa sii xoogeysanayay Afartii Bilood ee lasoo dhaafay inkastoo xukuumaddu ay sheegtay in ay soo gaba gabaysay kacdoonka hadane wali waxaa socda hardan loogu jiro isbedel dhanka maamulka ah oo Itoobiya ka hana qaada.